“Dawladda maantu waxay caado ka dhigatay in aanay marnaba Doorasho ogolayn, waase lagu qarqarsiiyay” | Somaliland.Org
“Dawladda maantu waxay caado ka dhigatay in aanay marnaba Doorasho ogolayn, waase lagu qarqarsiiyay”
November 29, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa Xukuumadda Somaliland ku dhaliilay in aanay hore diyaar ugu ahayn qabashada Doorasho dalka laga hirgeliyo, khilaafaadkii dalka ka dhacayna ay sabab u ahayd mucangagnimo uu sheegay inay Xukuumaddu la timi. Waxaanu sheegay in diidmo ka timi Shacabka Somaliland iyo Beesha Caalamka ka dib, Xukuumadda Madaxweyne Rayaale lagu qasbayo inay Doorasho qabato.
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Axmed-Siilaanyo oo shalay ka hadlayay Munaasibad hoggaanka sare ee Xisbigiisa lagu soo dhaweyay oo lagu qabtay Xaafadda Boqol iyo Kontonka ee Degmada 26-June ee Hargeysa, ayaa marxaladda dalku ku jiro ku tilmaamay kuwo aad u xasaasi ah. waxaanu khilaafaadkii Siyaasadeed ee dalka ka dhacay dusha u saaray Xukuumadda oo uu sheegay inay sabab u ahayd damac uu sheegay inuu ka hayay in ay xilka sii hayso oo aanay dalka Doorasho ka hirgelin. “Waxaynu maanta maraynaa marxalad aad xasaasi u ah. waxa jiray oo aynu ka soo gudubnay waqtiyada qaarkood oo aynu ku siganay in dalkeena uu burbur ku yimaaddo, iyada oo ay sabab u tahay mucangagnimada Maamulka maanta jira oo damcay in uu waligii Xukunka iska haysto oo uu ku fadhiyo, umadda cadaadiyo, dadka dhaco oo waxeedii cuno. Isla markaana uu mustaqbalkeeda baabi’iyo iyo waxay u soo halgantay in uu daaqadda ka tuuro. Ilaahay kama dhigin, kana dhigi maayo. Dadweynihii dalkan xoreeyay way joogaan, dadweynaha reer Somaliland maanta way fahamsan yihiin oo way ogyihiin waxay u soo mareen Madax-bannaanidooda.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha KULMIYE, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Maanta inagu dadkeena iyo dalkeena dagaal, xumaan iyo dhibaato midna uma quudhno. Waayo, waynu la soconaa waxa maanta ka socday Mandaqadda aynu ku nool nahay. Waynu ognahay dhibaatooyinka badan ee dalka aynu walaalaha nahay ee Soomaaliya haysta. Ilaahay baynu uga baryaynaa in uu dhibaatadaa ka dul qaado. Laakiin, inagu mar walba waxaynu iska jiraynaa in jarka ay ka dhaceen aynaan ka dhicin. Waa waxaynaan u doonaynin in uu dalkeena Dagaal ka dhaco. Cidda maanta dalkeena ka ilaalisa Dagaal, isku dhac iyo xumaani maaha maamulka maanta jira ee waxa weeye Umadda Somaliland iyo Axsaabta Mucaaradka ah ee Somaliland.”
Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) wuxuu sheegay in dalku inyar u jiro in ay doorasho ka qabsoonto, isla markaana wuxuu Xukuumadda ku eedeeyay inay ka caga-jiidaysay inay Doorasho dalka ka qabsoonto, hase ahaatee ay Dadweynaha Somaliland iyo Beesha Caalamku ku qasbayaan in doorashadu dhacdo. Waxaanu sheegay in dhawaan Guddida cusub ee Doorashadu ku dhawaaqi doonto waqtiga la qabanayo Doorashada. Mar uu arrintaa ka hadlayayna wuxuu yidhi, “Waxaanu leenahay, marxalado ayaynu ka soo gudubnay oo waxaynu qarka u saaranahay inaynu Doorasho xor iyo xalaal ah galno. Dawladda maanta joogta oo caado ka dhigatay oo muujisay in aanay marnaba Doorasho ogolayn, waa tii Caalamka iyo dadka Somaliland-ba ay muujiyeen in arrintaasi aanay ahayn mid dambe oo laga yeelayo ee maanta lagu soo qarqarsiiyay ee ay khasab ku tahay inay Doorasho qabtaan. Waa tii Maamulka Doorashada la bedelay ee Guddi cusub la sameeyay. Guddidii (Komishanka Doorashada) hawl fiican bay soo qabatay, waanay soo noqonaysaa. Way soo dhawdahay hawshii (Doorashadii) oo waxyar oo bilo yar ah oo aan muddo badan ahayn ayaa inooga hadhay. Waxaynu u diyaar-garoobaynaa oo aynu ku dhaqaaqaynaa in aynu Doorashadaa galno, waxaynu ku dhaqaaqayna in aynu Dalkan u samayno dawlad Cadaalad ku fadhida oo dalka horumarisa, isla markaana dhalinyarada ka joojisa ama muujisa inay ka xun tahay in Dhalinyaradu ay Badda isku daadiso ama ay dalka ka dhoofto amaba shaqo-la’aani ku timaaddo.”
Waxa kale oo uu Guddoomiyaha KULMIYE ku eedeeyay Xukuumadda inay Dhalinyarada dalka barayso wax uu ugu yeedhay Tuugo iyo Musuq-maasuq. “Doorasho ayaynu u diyaar-garoobaynaa, waanaynu iska celinaynaa in maanta Caruurtii la iibiyo, waa la iibsanayaa oo waxa la leeyahay Gaadhi baa laydiin iibinayaa oo laga duwo mabda’oodii, oo laga duwo Dawladnimadoodii oo ay ku tusayso taasi qiimaha ay dawladdu u hayso Dhalinyarada iyo Ubadka dalka u soo kacaya. Isla markaanaa ku abuurayso Musuq-maasuq, Tuugo iyo niyad-xumo. Taas miyay dhalinyaradu yeelaysaa, maya yeeli mayso. Dhalinyaradu taa miyay istaahishaa, maya ma istaahisho.” Ayuu hadalkiisa ku soo gebogebeeyay Guddoomiye Axmed.